Animation – Alpha Premium
The Bad Guys (2022) ##unicode ဇာတျလမျးဇာတျအိမျကောငျးတှကေိုပဲ အမွဲဖနျတီးထုတျလုပျတဲ့ DreamWorks Animationကနေ နောကျဆုံးထှကျရှိလာတဲ့ The Bad Guys ကာတှနျးကားကို တငျဆကျပေးလိုကျပါတယျနျော ဒီကာတှနျးကားလေးကလညျး အတျောလေးကို ဇာတျလမျးကောငျးတဲ့အထဲမှာ ပါတယျပွောရမှာပါ လူတှဆေိုတာ မွှတေို့ ဝံပုလှတေို့ ငါးမနျးတို့ဆိုရငျ မကောငျးတဲ့အကောငျတှလေို့ပဲ သတျမှတျထားကွတာ ထုံးစံပါပဲ ဒီဇာတျကားလေးမှာလညျး ဝံပုလှေ ၊ မွှေ၊ ငါးမနျး၊ ပငျ့ကူနဲ့ ပါရာနာဆိုတဲ့ အကောငျလေးက လူဆိုးတှပေေါ့ ဘဏျဓားပွတိုကျတယျ၊ ခိုးတယျ ၊ လုယကျတယျ မကောငျးတာမှနျသမြှ အကုနျလုပျရငျး The bad guys လူဆိုးဘှဲ့ကို ပြျောပြျောကွီးခံယူထားကွတဲ့ဟာတှေ တဈနမှေ့ာတော့ သမိုငျးဝငျမယျ့ ရာဇဝတျမှုကွီးကိုကြူးလှနျမယျဆိုပွီး မွို့ကပေးတဲ့ အတျောဆုံးပွညျသူဆုဖွဈတဲ့ ရှလေငျးပိုငျရုပျတုကွီးကို သူတို့က ခိုးဖို့ကွံပါလရေော အဲ့မှာ အဖမျးခံလိုကျရတာပေါ့ ဒါပမေယျ့ ကွှကျလေးဖွဈတဲ့ ပရျောဖကျဆာ မာမာလိတျက လူဆိုးတှဖွေဈတဲ့ သူတို့ကို လူကောငျးဖွဈအောငျပွောငျးပေးပါ့မယျ သူတို့က လူကောငျးဆိုတာ ဘာလဲမသိလို့ပါဆိုပွီး အာမခံပေးတဲ့အခြိနျမှာ လူဆိုးလေးတှရေဲ့ဘဝ ဘယျလိုအပွောငျးအလဲတှေ ဖွဈလာမလဲဆိုတာ ဒီဇာတျကားမှာ စောငျ့မြှျောအားပေးကွပါဦးနျော ##zawgyi ဇာတ်လမ်းဇာတ်အိမ်ကောင်းတွေကိုပဲ အမြဲဖန်တီးထုတ်လုပ်တဲ့ DreamWorks Animationကနေ နောက်ဆုံးထွက်ရှိလာတဲ့ The Bad ...
IMDB: 7.0/10 4,416 votes
Apollo 10½: A Space Age Childhood (2022) ##unicode လကမ်ဘာပျေါကိုပထမဆုံးဆငျးသကျခဲ့တဲ့ Apollo 11ယာဉျအကွောငျးကိုအခွခေံထားတဲ့ ဒီဇာတျကားမှာဆိုရငျတော့ အသကျ၁၀နှဈအရှယျကလေးတဈယောကျရဲ့ စိတျကူးယဉျဇာတျလမျးလေးကိုမွငျတှရေ့မှာပဲဖွဈပါတယျ NASAရုံးခြုပျရှိတဲ့ Houstonရပျကှကျက မိသားစုတှဟော အာကာသသိပ်ပံအကွောငျးတှကေို သိပျစိတျဝငျစားကွပါတယျ အဲဒီရပျကှကျကလူတှကေလညျး နာဆာမှာ အငျဂငျြနီယာပိုငျးရော အာကာသဝတျစုံခြုပျတဲ့နရောကအစဝငျလုပျကွတဲ့လူတှပေါ အဲဒီရပျကှကျထဲက စတနျဆိုတဲ့ကောငျလေးဟာ နာဆာရုံးနားက သူတို့ရဲ့ရပျကှကျထဲကဘဝတှအေကွောငျး ၊ မိသားစုတှရေဲ့အကွောငျးတှနေဲ့ သူ့ရဲ့ငယျဘဝအကွောငျးကိုပုံဖျောပွောသှားတာကို ဒီဇာတျလမျးမှာတှမွေ့ငျရမယျ့အပွငျ ၁၉၆၉ခုနှဈနှဦေးမှာ လကမ်ဘာပျေါကို လူတှဆေငျးသကျဖို့ကွိုးစားခဲ့ပါတယျ အာကာသသိပ်ပံကိုစှဲလမျးလှနျးတဲ့ စတနျဟာ သူ့ကိုယျသူအာကာသယာဉျမှူးအဖွဈစိတျကူးယဉျပွီး လကိုဆငျးသကျခဲ့တဲ့အကွောငျးကို ဘယျလိုပွောသှားမလဲဆိုတာကိုမွငျတှရေ့မယျ့ ဇာတျလမျးဇာတျအိမျကောငျးကောငျးဇာတျကားလေးဖွဈလို့ ကွညျ့ရူအားပေးကွပါဦးနျော ##zawgyi လကမ္ဘာပေါ်ကိုပထမဆုံးဆင်းသက်ခဲ့တဲ့ Apollo 11ယာဉ်အကြောင်းကိုအခြေခံထားတဲ့ ဒီဇာတ်ကားမှာဆိုရင်တော့ အသက်၁၀နှစ်အရွယ်ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ကူးယဉ်ဇာတ်လမ်းလေးကိုမြင်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် NASAရုံးချုပ်ရှိတဲ့ Houstonရပ်ကွက်က မိသားစုတွေဟာ အာကာသသိပ္ပံအကြောင်းတွေကို သိပ်စိတ်ဝင်စားကြပါတယ် အဲဒီရပ်ကွက်ကလူတွေကလည်း နာဆာမှာ အင်ဂျင်နီယာပိုင်းရော အာကာသဝတ်စုံချုပ်တဲ့နေရာကအစဝင်လုပ်ကြတဲ့လူတွေပါ အဲဒီရပ်ကွက်ထဲက စတန်ဆိုတဲ့ကောင်လေးဟာ နာဆာရုံးနားက သူတို့ရဲ့ရပ်ကွက်ထဲကဘဝတွေအကြောင်း ၊ မိသားစုတွေရဲ့အကြောင်းတွေနဲ့ သူ့ရဲ့ငယ်ဘဝအကြောင်းကိုပုံဖော်ပြောသွားတာကို ဒီဇာတ်လမ်းမှာတွေ့မြင်ရမယ့်အပြင် ၁၉၆၉ခုနှစ်နွေဦးမှာ လကမ္ဘာပေါ်ကို လူတွေဆင်းသက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ် အာကာသသိပ္ပံကိုစွဲလမ်းလွန်းတဲ့ စတန်ဟာ သူ့ကိုယ်သူအာကာသယာဉ်မှူးအဖြစ်စိတ်ကူးယဉ်ပြီး လကိုဆင်းသက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကို ဘယ်လိုပြောသွားမလဲဆိုတာကိုမြင်တွေ့ရမယ့် ဇာတ်လမ်းဇာတ်အိမ်ကောင်းကောင်းဇာတ်ကားလေးဖြစ်လို့ ကြည့်ရူအားပေးကြပါဦးနော် Review – Hmue File Size – 1GB,2GB Format…mp4 Quality : 720p WED-DL ,1080p WED-DL Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard ...
Turning Red (2022) ##unicode Turning Redဇာတျကားမှာတော့ 13နှဈအရှယျMeiဟာ မိခငျဖွဈသူMingရဲ့စကားမှနျသမြှကိုနားထောငျရကာ အမဖွေဈသူရဲ့ထိနျးခြုပျမှုကိုအမွဲခံစားနရေသူဖွဈတယျ။မွှီးကောငျပေါကျအရှယျMeiဟာ အမဖွေဈသူရဲ့ လိမ်မာတဲ့သမီးလေးအဖွဈမနခေငျြတော့ဘဲ သူမလုပျခငျြတာတှကေို စလုပျလာခဲ့တဲ့အတှကျ အမဖွေဈသူနဲ့ပွသာနာတကျခဲ့ရပါတယျ။ တဈနမှေ့ာတော့ Meiတဈယောကျဟာ စိတျလှုပျရှားလာရငျအနီရောငျပနျဒါအဖွဈပွောငျးလဲသှားပါတော့တယျ။ ဒါဟာသူမအမရေဲ့ ဘိုးဘေးတှလေကျဆငျ့ကမျးလာတဲ့ ကောငျးခြီးပေးခံရမှုတဈခုလို့Meiအမကေ ရှငျးပွခဲ့ပွီးတော့ အနီရောငျလပွညျ့ညကရြငျ အနီရောငျပနျဒါဝိဉာဉျကိုဆှဲထုတျပွီးတော့ ပုံမှနျတိုငျးနထေိုငျနိုငျမယျလို့လဲ Meiကိုပွောပွခဲ့ပါတယျ။ဒီလိုနဲ့Meiတဈယောကျဟာ သူအနီရောငျပနျဒါအဖွဈမပွောငျးသှားအောငျ သူ့စိတျခံစားခကျြတှကေို ထိနျးခြုပျဖို့အတှကျကွိုးစားရပါတော့တယျ။Meiတဈယောကျမူလပုံစံကိုပွနျပွောငျးနိုငျပါ့မလား။ သူမအမရေဲ့ထိနျးခြုပျမှုတှအေောကျကနေ လှတျမွောကျပါ့မလားဆိုတာကို ကွညျ့ရှုကွပါအုံး။ ##zawgyi Turning Redဇာတ်ကားမှာတော့ 13နှစ်အရွယ်Meiဟာ မိခင်ဖြစ်သူMingရဲ့စကားမှန်သမျှကိုနားထောင်ရကာ အမေဖြစ်သူရဲ့ထိန်းချုပ်မှုကိုအမြဲခံစားနေရသူဖြစ်တယ်။မြှီးကောင်ပေါက်အရွယ်Meiဟာ အမေဖြစ်သူရဲ့ လိမ္မာတဲ့သမီးလေးအဖြစ်မနေချင်တော့ဘဲ သူမလုပ်ချင်တာတွေကို စလုပ်လာခဲ့တဲ့အတွက် အမေဖြစ်သူနဲ့ပြသာနာတက်ခဲ့ရပါတယ်။ တစ်နေ့မှာတော့ Meiတစ်ယောက်ဟာ စိတ်လှုပ်ရှားလာရင်အနီရောင်ပန်ဒါအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပါတော့တယ်။ ဒါဟာသူမအမေရဲ့ ဘိုးဘေးတွေလက်ဆင့်ကမ်းလာတဲ့ ကောင်းချီးပေးခံရမှုတစ်ခုလို့Meiအမေက ရှင်းပြခဲ့ပြီးတော့ အနီရောင်လပြည့်ညကျရင် အနီရောင်ပန်ဒါဝိဉာဉ်ကိုဆွဲထုတ်ပြီးတော့ ပုံမှန်တိုင်းနေထိုင်နိုင်မယ်လို့လဲ Meiကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့Meiတစ်ယောက်ဟာ သူအနီရောင်ပန်ဒါအဖြစ်မပြောင်းသွားအောင် သူ့စိတ်ခံစားချက်တွေကို ထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားရပါတော့တယ်။Meiတစ်ယောက်မူလပုံစံကိုပြန်ပြောင်းနိုင်ပါ့မလား။ သူမအမေရဲ့ထိန်းချုပ်မှုတွေအောက်ကနေ လွတ်မြောက်ပါ့မလားဆိုတာကို ကြည့်ရှုကြပါအုံး။ Review – Myet Chel File Size – 1GB,2GB Format…mp4 Quality : 720p WED-DL,1080p WED-DL Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Myet Chel Encoded by Arrow ========================================================================= GDtot လင့်ဒေါင်းနည်း (အစိမ်းပြထားတာကိုကလစ်ပါ) GDtot (uc browser ကိုသုံးရငျပိုကောငျးပါတယျ) Mega.nz ...
IMDB: 7.1/10 19k votes
Fireheart (2022) ##unicode ကမ်ဘာ့ပထမဆုံးအမြိုးသမီးမီးသတျသမားဖွဈခငျြခဲ့တဲ့ ဂြော့ဂြီယာဆိုတဲ့ အသကျ၁၆နှဈအရှယျမိနျးကလေးအကွောငျးကိုမွငျတှရေ့မယျ့ ဒီကာတှနျးကားလေးမှာတော့ ကိုယျ့အိပျမကျနောကျကိုလိုကျဖို့သတ်တိတှေ မိသားစုရဲ့ခဈြခွငျးမတ်ေတာတှနေဲ့ သူငယျခငျြးမိတျဆှတှေနေဲ့ပူးပေါငျးဆောငျရှကျတတျမှုအကွောငျးကိုဖျောကြူးထားတာပဲဖွဈလို့ ဟာသလေးတှနေဲ့ကွညျ့ကောငျးတဲ့ဇာတျကားကောငျးတဈကားဖွဈလာမှာပါ မီးသတျအဖှဲ့ကပ်ပတိနျဖွဈခဲ့ဖူးတဲ့ ဂြော့ဂြီယာရဲ့အဖဟော သမီးလေးမှေးလာတော့ မီးတှငျးထဲမှာအမဆေုံးပါးသှားခဲ့ရတဲ့ သမီးကို တဈယောကျတညျးစောငျ့ရှောကျနိုငျဖို့ မီးသတျသမားအလုပျကနေ အပျခြုပျဆရာအလုပျကိုပွောငျးခဲ့ရတဲ့လူပါ အဖသှေေးအပွညျ့ပါတဲ့ဂြော့ဂြီယာလေးဟာ ငယျငယျလေးကတညျးက မီးသတျသမားဖွဈခငျြခဲ့ပါတယျ ဒါပမေယျ့ သူ့အဖကေ မိနျးကလေးတှေ မီးသတျသမားဖွဈခှငျ့မရှိဘူးဆိုပွီးတားခဲ့ရပါတယျ ဒါပမေယျ့လညျး အိပျမကျကိုလကျမလှတျခဲ့တဲ့ ဂြော့ဂြီယာဟာ သူ အသကျ၁၆နှဈကိုရောကျတဲ့အခါမှာတော့ သူတို့မွို့မှာထူးဆနျးတဲ့မီးလောငျမှုတှဖွေဈလာခဲ့ပါတယျ ဒီမီးလောငျမှုတှကေိုစုံစမျးငွိမျးသတျဖို့ သူ့အဖတောဝနျပေးခံရတဲ့အခါမှာတော့ သူ့အဖရေဲ့အဖှဲ့ထဲကို အဖမေသိအောငျယောကျြားလေးလိုရုပျဖကျြပွီးဝငျခဲ့တဲ့ ဂြော့ဂြီယာတဈယောကျ ဘယျလိုဆကျဖွဈမလဲဆိုတာ ဒီဇာတျကားမှာကွညျ့ရူအားပေးကွပါဦးနျော ##zawgyi ကမ္ဘာ့ပထမဆုံးအမျိုးသမီးမီးသတ်သမားဖြစ်ချင်ခဲ့တဲ့ ဂျော့ဂျီယာဆိုတဲ့ အသက်၁၆နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးအကြောင်းကိုမြင်တွေ့ရမယ့် ဒီကာတွန်းကားလေးမှာတော့ ကိုယ့်အိပ်မက်နောက်ကိုလိုက်ဖို့သတ္တိတွေ မိသားစုရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေနဲ့ သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တတ်မှုအကြောင်းကိုဖော်ကျူးထားတာပဲဖြစ်လို့ ဟာသလေးတွေနဲ့ကြည့်ကောင်းတဲ့ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်လာမှာပါ မီးသတ်အဖွဲ့ကပ္ပတိန်ဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ ဂျော့ဂျီယာရဲ့အဖေဟာ သမီးလေးမွေးလာတော့ မီးတွင်းထဲမှာအမေဆုံးပါးသွားခဲ့ရတဲ့ သမီးကို တစ်ယောက်တည်းစောင့်ရှောက်နိုင်ဖို့ မီးသတ်သမားအလုပ်ကနေ အပ်ချုပ်ဆရာအလုပ်ကိုပြောင်းခဲ့ရတဲ့လူပါ အဖေသွေးအပြည့်ပါတဲ့ဂျော့ဂျီယာလေးဟာ ငယ်ငယ်လေးကတည်းက မီးသတ်သမားဖြစ်ချင်ခဲ့ပါတယ် ဒါပေမယ့် သူ့အဖေက မိန်းကလေးတွေ မီးသတ်သမားဖြစ်ခွင့်မရှိဘူးဆိုပြီးတားခဲ့ရပါတယ် ဒါပေမယ့်လည်း အိပ်မက်ကိုလက်မလွှတ်ခဲ့တဲ့ ဂျော့ဂျီယာဟာ သူ အသက်၁၆နှစ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ သူတို့မြို့မှာထူးဆန်းတဲ့မီးလောင်မှုတွေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ် ဒီမီးလောင်မှုတွေကိုစုံစမ်းငြိမ်းသတ်ဖို့ သူ့အဖေတာဝန်ပေးခံရတဲ့အခါမှာတော့ သူ့အဖေရဲ့အဖွဲ့ထဲကို အဖေမသိအောင်ယောက်ျားလေးလိုရုပ်ဖျက်ပြီးဝင်ခဲ့တဲ့ ဂျော့ဂျီယာတစ်ယောက် ဘယ်လိုဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာ ဒီဇာတ်ကားမှာကြည့်ရူအားပေးကြပါဦးနော် Review – Hmue File Size – 900MB,2GB Format…mp4 Quality : 1080p WED-DL,720p WED-DL Genre ...
IMDB: 6.3/10 2447 votes
Catwoman: Hunted (2022) ##unicode Catwoman: Huntedဇာတျကားမှာတော့ Catwomanက Leviathanဂိုဏျးက အဖိုးတနျ‌ကြောကျကို ခိုးယူပွီးထှကျပွေးသှားခြိနျမှာ Batwomanဖမျးဆီးတာကို ခံလိုကျရပါတယျ။ Batwomanနဲ့အတူ Agent Juliaနဲ့ Agent Kingဟာ Leviathanဂိုဏျးကို ဖွိုခှဲပွီး ‌ဂိုဏျးခေါငျးဆောငျကိုဖမျးဆီးဖို့ ကူညီပေးရငျ Batwomanရဲ့ ပွဈမှုတှအေားလုံးကိုဖယျရှားပေးမယျလို့ ကမျးလှမျးခဲ့ပါတယျ။အဲ့ဒါကွောငျ့မို့ Catwomanက Batwomanနဲ့ပူးပေါငျးပွီးတော့ Leviathanခေါငျးဆောငျတှေ စုဝေးတဲ့အစညျးအဝေးကို တိုကျခိုကျဖို့ စီစဉျရပါတော့တယျ။ စှမျးအားကွီးရာဇဝတျသားတှေ Catwomanနဲ့Batwomanနှဈယောကျပူးပေါငျးပွီး ဘယျလိုနှိမျနငျးမလဲဆိုတာကို ကွညျ့ရှုကွပါအုံး။ ##zawgyi Catwoman: Huntedဇာတ်ကားမှာတော့ Catwomanက Leviathanဂိုဏ်းက အဖိုးတန်‌ကျောက်ကို ခိုးယူပြီးထွက်ပြေးသွားချိန်မှာ Batwomanဖမ်းဆီးတာကို ခံလိုက်ရပါတယ်။ Batwomanနဲ့အတူ Agent Juliaနဲ့ Agent Kingဟာ Leviathanဂိုဏ်းကို ဖြိုခွဲပြီး ‌ဂိုဏ်းခေါင်းဆောင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့ ကူညီပေးရင် Batwomanရဲ့ ပြစ်မှုတွေအားလုံးကိုဖယ်ရှားပေးမယ်လို့ ကမ်းလှမ်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့ Catwomanက Batwomanနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ Leviathanခေါင်းဆောင်တွေ စုဝေးတဲ့အစည်းအဝေးကို တိုက်ခိုက်ဖို့ စီစဉ်ရပါတော့တယ်။ စွမ်းအားကြီးရာဇ၀တ်သားတွေ Catwomanနဲ့Batwomanနှစ်ယောက်ပူးပေါင်းပြီး ဘယ်လိုနှိမ်နင်းမလဲဆိုတာကို ကြည့်ရှုကြပါအုံး။ Review – Myet Chel File Size – 1GB,2GB Format…mp4 Quality : 1080p WED-DL,720p WED-DL Genre : ...
The Ice Age Adventures of Buck Wild (2022) ##unicode Ice Age ကာတှနျးကားတှကေတော့ အမွဲရယျရပွီး ခဈြဖို့လညျးကောငျး၊ကွညျ့လို့လညျးကောငျးတဲ့ဇာတျကားတှမေို့ ပရိတျသတျအခိုငျအမာရှိတဲ့နာမညျကွီးဇာတျကားတှပေဲဖွဈတာကိုသိကွမှာပါ ဒီတဈခါမှာတော့ နောကျဆုံးထှကျ Ice Ageဇာတျကားသဈကိုတငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ ဒီဇာတျကားထဲမှာတော့ ဘကျချဝှိုငျးရဲ့ဟာသလေးတှရေယျ ပေါ့ဆမျညီနောငျရဲ့ အလှဲတှကေိုအဓိကဖျောပွထားပါတယျ ပေါ့ဆမျညီနောငျ ခရကျရျှနဲ့အကျဒီက အမှေးရှညျဆငျမလေး မနျနီရဲ့အုပျထိနျးမှုအောကျမှာမနခေငျြတော့ဘူးပေါ့ သူတို့ကအလှဲတှလေုပျလို့ ဟိုက အဈမကွီးလိုစောငျ့ရှောကျပေးတာကိုသူတို့ကိုခြုပျခယျြပါတယျ ဆိုပွီးမွငျလာပါတယျ ဒါနဲ့ သူတို့ဟာသူနမေယျဆိုပွီး ပြောကျဆုံးနတေဲ့မွို့တျောကိုထှကျလာခဲ့ကွပါတယျ ဒါပမေယျ့ အလှဲပဲလုပျတတျတဲ့ပေါ့ဆမျညီနောငျကို ဘကျချဝှိုငျးကကယျတငျထားပေးခဲ့ရပါတယျ တဈဖကျမှာလညျး ဘကျချဝှိုငျးက ဒိုငျနိုဆောတှရေဲ့အန်တရာယျကိုကာကှယျဖို့ကွိုးစားနခေဲ့တာပါ ပေါ့ဆမျညီနောငျက သူတို့ပါကူညီပါမယျပေါ့ ဒီလိုနဲ့ အဆော့သနျအလှဲသိပျလုပျတတျတဲ့ သူတို့ညီနောငျကိုထိနျးရငျး ဘကျချဝှိုငျးတဈယောကျ ဒိုငျနိုဆောတှအေန်တရာယျတှကေိုလညျး ဘယျလိုကာကှယျမလဲဆိုတာ ဒီဇာတျကားမှာကွညျ့ရူအားပေးကွပါဦးနျော ##zawgyi Ice Age ကာတွန်းကားတွေကတော့ အမြဲရယ်ရပြီး ချစ်ဖို့လည်းကောင်း၊ကြည့်လို့လည်းကောင်းတဲ့ဇာတ်ကားတွေမို့ ပရိတ်သတ်အခိုင်အမာရှိတဲ့နာမည်ကြီးဇာတ်ကားတွေပဲဖြစ်တာကိုသိကြမှာပါ ဒီတစ်ခါမှာတော့ နောက်ဆုံးထွက် Ice Ageဇာတ်ကားသစ်ကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ဒီဇာတ်ကားထဲမှာတော့ ဘက်ခ်ဝှိုင်းရဲ့ဟာသလေးတွေရယ် ပေါ့ဆမ်ညီနောင်ရဲ့ အလွဲတွေကိုအဓိကဖော်ပြထားပါတယ် ပေါ့ဆမ်ညီနောင် ခရက်ရ်ှနဲ့အက်ဒီက အမွှေးရှည်ဆင်မလေး မန်နီရဲ့အုပ်ထိန်းမှုအောက်မှာမနေချင်တော့ဘူးပေါ့ သူတို့ကအလွဲတွေလုပ်လို့ ဟိုက အစ်မကြီးလိုစောင့်ရှောက်ပေးတာကိုသူတို့ကိုချုပ်ချယ်ပါတယ် ဆိုပြီးမြင်လာပါတယ် ဒါနဲ့ သူတို့ဟာသူနေမယ်ဆိုပြီး ပျောက်ဆုံးနေတဲ့မြို့တော်ကိုထွက်လာခဲ့ကြပါတယ် ဒါပေမယ့် အလွဲပဲလုပ်တတ်တဲ့ပေါ့ဆမ်ညီနောင်ကို ဘက်ခ်ဝှိုင်းကကယ်တင်ထားပေးခဲ့ရပါတယ် တစ်ဖက်မှာလည်း ဘက်ခ်ဝှိုင်းက ဒိုင်နိုဆောတွေရဲ့အန္တရာယ်ကိုကာကွယ်ဖို့ကြိုးစားနေခဲ့တာပါ ပေါ့ဆမ်ညီနောင်က သူတို့ပါကူညီပါမယ်ပေါ့ ဒီလိုနဲ့ အဆော့သန်အလွဲသိပ်လုပ်တတ်တဲ့ သူတို့ညီနောင်ကိုထိန်းရင်း ဘက်ခ်ဝှိုင်းတစ်ယောက် ဒိုင်နိုဆောတွေအန္တရာယ်တွေကိုလည်း ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲဆိုတာ ဒီဇာတ်ကားမှာကြည့်ရူအားပေးကြပါဦးနော် Review – Phyu Sin File Size – ...
Tom and Jerry Cowboy Up! (2022) ##unicode Tom နဲ့ jerry ရဲ့ 2022 အသဈထှကျကားလေးကိုတငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ။ Bettyဟာ အဖိုးဖွဈသူထားသှားတဲ့ Bensonမှေးမွူရေးခွံကို ထိနျးသိမျးဖို့ကွိုးစားနသေူဖွဈပါတယျ။ Bettyတို့အိမျမှာ Jerryနဲ့ သူ့တူသုံးကောငျဟာအတူတူပြျောပြျောရှငျရှငျနထေိုငျနကွေပျါတယျ။ တဈနမှေ့ာတော့မွို့မှာနတေဲ့ Betty ရဲ့မောငျ Bentleyဟာ သူ့ကွောငျTomနဲ့အတူ Bensonမှေးမွူရေးခွံကိုရောကျလာခဲ့တယျ။Bentleyက ကွှကျကွောကျရောဂါရှိတဲ့အတှကျ အိမျကကွှကျတှအေားလုံးကိုရှငျးဖို့ Tomကိုအမိနျ့ပေးခဲ့တယျ။ ဒါပမေဲ့Tomနဲ့ Jerryဟာ မဟာမိတျလုပျကာ ငွိမျးခမျြးရေးယူထားကွတာပါတယျ။ Bensonမှေးမွူရေးခွံကို လိုခငျြနတေဲ့ မွပေိုငျရှငျAugustဟာ Bensonမှေးမွူရေးခွံကိုအပိုငျသိမျးဖို့အတှကျ အကှကျခစြီစဉျကာ Bettyတို့အိမျက ကွှကျတှဖေမျးပေးဖို့သူ့လကျထောကျကိုကွောငျတှနေဲ့ အတူလှတျလိုကျခဲ့တယျ။Augustရဲ့လကျထောကျနဲ့‌သူ့ကွောငျတှရေဲ့ ရနျကနေ Jerryရဲ့ တူဝရီးလေးယောကျဘယျလိုလှတျအောငျပွေးရမလဲ။ Augustရဲ့ အကွံတှရေော အောငျမွငျသှားမှာလားဆိုတာ ကွညျ့ရှုကွပါအုံး။ ##zawgyi Tom နဲ့ jerry ရဲ့ 2022 အသစ်ထွက်ကားလေးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Bettyဟာ အဖိုးဖြစ်သူထားသွားတဲ့ Bensonမွေးမြူရေးခြံကို ထိန်းသိမ်းဖို့ကြိုးစားနေသူဖြစ်ပါတယ်။ Bettyတို့အိမ်မှာ Jerryနဲ့ သူ့တူသုံးကောင်ဟာအတူတူပျော်ပျော်ရွင်ရွှင်နေထိုင်နေကြပ်ါတယ်။ တစ်နေ့မှာတော့မြို့မှာနေတဲ့ Betty ရဲ့မောင် Bentleyဟာ သူ့ကြောင်Tomနဲ့အတူ Bensonမွေးမြူရေးခြံကိုရောက်လာခဲ့တယ်။Bentleyက ကြွက်ကြောက်ရောဂါရှိတဲ့အတွက် အိမ်ကကြွက်တွေအားလုံးကိုရှင်းဖို့ Tomကိုအမိန့်ပေးခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့Tomနဲ့ Jerryဟာ မဟာမိတ်လုပ်ကာ ငြိမ်းချမ်းရေးယူထားကြတာပါတယ်။ Bensonမွေးမြူရေးခြံကို လိုချင်နေတဲ့ မြေပိုင်ရှင်Augustဟာ Bensonမွေးမြူရေးခြံကိုအပိုင်သိမ်းဖို့အတွက် အကွက်ချစီစဉ်ကာ Bettyတို့အိမ်က ကြွက်တွေဖမ်းပေးဖို့သူ့လက်ထောက်ကိုကြောင်တွေနဲ့ အတူလွှတ်လိုက်ခဲ့တယ်။Augustရဲ့လက်ထောက်နဲ့‌သူ့ကြောင်တွေရဲ့ ရန်ကနေ Jerryရဲ့ တူဝရီးလေးယောက်ဘယ်လိုလွှတ်အောင်ပြေးရမလဲ။ Augustရဲ့ အကြံတွေရော အောင်မြင်သွားမှာလားဆိုတာ ကြည့်ရှုကြပါအုံး။ Review – ...
Hotel Transylvania: Transformania (2022) ##unicode အားလုံးစောငျ့မြှျောနကွေတဲ့ Hotel Transylvania4လေးထှကျရှိလာပါပွီ ဒီကားလေးမှာတော့ဒရကျဟာဟိုတယျထရနျစလဗေေးနီးယားကွီးကိုသမီးမဗေဈနဲ့ သားမကျဂြှနျနီလကျထဲကိုအပျပွီးအနားယူဖို့ပွငျဆငျနပေါတယျ ဒါပမေယျ့လညျးဒရကျဟာလူသားသားမကျဂြှနျနီကိုအမွဲတမျးစိတျတိုငျးမကခြဲ့တဲ့သူဖွဈတဲ့အတှကျ ဟိုတယျကွီးကိုလှဲပွောငျးပေးဖို့အခြိနျနီးကပျလာတဲ့အခါအမွဲတမျးတလှဲလုပျတတျတဲ့ သူ့ရဲ့သားမကျဆီကိုမပေးခငျြဘဲဖွဈလာပါတယျ အဲ့တာကွောငျ့လူသားတှအေနနေဲ့ဟိုတယျကွီးကိုဆကျခံလို့မရဘူးဆိုပွီးလိမျညာပွောလိုကျပါတယျ ဂြှနျနီဟာသူလူသားဖွဈနတေဲ့အတှကျကွောငျ့ဒီလိုဖွဈရတာဆိုပွီးဗနျဟယျဆငျးတီထှငျထားတဲ့ ရောငျခွညျနဲ့မကောငျးဆိုးဝါးအဖွဈကိုပွောငျးလဲယူလိုကျပါတော့တယျ ဒရကျတဈယောကျဒီအကွောငျးသမီးဖွဈသူသိသှားမှာကိုစိုးရိမျရငျးဂြှနျနီကိုလူသားအဖွဈ ပွောငျးလဲဖို့ကွိုးစားပါတော့တယျ ကံဆိုးခငျြတော့ဒရကျအပါအဝငျမှနျးစတားအပေါငျးအပါတှေ အားလုံးလညျး အဲ့ဒီရောငျခွညျကွောငျ့ပဲလူသားအဖွဈကိုပွောငျးလဲသှားပါတော့တယျ ဒါ့အပွငျဂြှနျနီကိုလညျးလူသားအဖွဈပွောငျးပွီးသူတို့ကိုယျတိုငျလညျးမှနျးစတားအဖွဈ ပွနျပွောငျးပေးနိုငျတဲ့ရောငျခွညျကြောကျတုံးဟာလညျးကှဲအကျသှားတဲ့အခါမှာတော့... သူတို့အားလုံးမူလပုံစံကိုပွနျပွောငျးနိုငျပါ့မလား သူတို့ကိုအသှငျပွောငျးပေးနိုငျမယျ့ရောငျခွညျကြောကျတုံးကိုရောရှာတှနေို့ငျပါ့မလား ဆိုတာကိုတော့ဇာတျလမျးထဲမှာဆကျလကျကွညျ့ရှုလိုကျကွပါဦးနျော ##zawgyi အားလုံးစောင့်မျှော်နေကြတဲ့ Hotel Transylvania4လေးထွက်ရှိလာပါပြီ ဒီကားလေးမှာတော့ဒရက်ဟာဟိုတယ်ထရန်စလေဗေးနီးယားကြီးကိုသမီးမေဗစ်နဲ့ သားမက်ဂျွန်နီလက်ထဲကိုအပ်ပြီးအနားယူဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ် ဒါပေမယ့်လည်းဒရက်ဟာလူသားသားမက်ဂျွန်နီကိုအမြဲတမ်းစိတ်တိုင်းမကျခဲ့တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက် ဟိုတယ်ကြီးကိုလွှဲပြောင်းပေးဖို့အချိန်နီးကပ်လာတဲ့အခါအမြဲတမ်းတလွဲလုပ်တတ်တဲ့ သူ့ရဲ့သားမက်ဆီကိုမပေးချင်ဘဲဖြစ်လာပါတယ် အဲ့တာကြောင့်လူသားတွေအနေနဲ့ဟိုတယ်ကြီးကိုဆက်ခံလို့မရဘူးဆိုပြီးလိမ်ညာပြောလိုက်ပါတယ် ဂျွန်နီဟာသူလူသားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတာဆိုပြီးဗန်ဟယ်ဆင်းတီထွင်ထားတဲ့ ရောင်ခြည်နဲ့မကောင်းဆိုးဝါးအဖြစ်ကိုပြောင်းလဲယူလိုက်ပါတော့တယ် ဒရက်တစ်ယောက်ဒီအကြောင်းသမီးဖြစ်သူသိသွားမှာကိုစိုးရိမ်ရင်းဂျွန်နီကိုလူသားအဖြစ် ပြောင်းလဲဖို့ကြိုးစားပါတော့တယ် ကံဆိုးချင်တော့ဒရက်အပါအဝင်မွန်းစတားအပေါင်းအပါတွေ အားလုံးလည်း အဲ့ဒီရောင်ခြည်ကြောင့်ပဲလူသားအဖြစ်ကိုပြောင်းလဲသွားပါတော့တယ် ဒါ့အပြင်ဂျွန်နီကိုလည်းလူသားအဖြစ်ပြောင်းပြီးသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းမွန်းစတားအဖြစ် ပြန်ပြောင်းပေးနိုင်တဲ့ရောင်ခြည်ကျောက်တုံးဟာလည်းကွဲအက်သွားတဲ့အခါမှာတော့... သူတို့အားလုံးမူလပုံစံကိုပြန်ပြောင်းနိုင်ပါ့မလား သူတို့ကိုအသွင်ပြောင်းပေးနိုင်မယ့်ရောင်ခြည်ကျောက်တုံးကိုရောရှာတွေ့နိုင်ပါ့မလား ဆိုတာကိုတော့ဇာတ်လမ်းထဲမှာဆက်လက်ကြည့်ရှုလိုက်ကြပါဦးနော် Review – Phyu Sin File Size – 2.5GB,1.2GB Format…mp4 Quality : 1080p WED-DL,720p WED-DL Genre : Action,Drama,Bio Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Phyu Sin & Hmue Encoded by Arrow
Seal Team (2021) ##unicode Seal Team ဇာတျကားမှာတော့ ပငျလယျဖြံလေးQuinnက အန်တရာယျမြားတဲ့စှနျ့စားခနျးတှကေို လုပျရတာနှဈသကျတဲ့လူဖွဈပါတယျ။သူ့သူငယျခငျြးBenjiကတော့ သူရဲ့အကွံတှကေို ရူးမိုကျလိုကျတာလို့ အမွဲပွောတတျပမေဲ့သူဘယျသှားသှားအနားမှာရှိနပေေးတတျသူဖွဈတယျ။ Quinnနဲ့Benjiတို့ သူငယျခငျြးနှဈယောကျက အခငျြးခငျြးစောငျ့ရှောကျကွမယျလို့ ကတိပေးထားကွတာဖွဈတယျ။တဈနမှေ့ာတော့ Quinnရဲ့စှနျ့စားခနျးကို လိုကျလာတဲ့ Benjiတဈယောကျဟာ ငါးမနျးGrimesရဲ့ စားတာကိုခံလိုကျရတယျ။ သူငယျခငျြးကိုဆုံးရှုံးလိုကျရတဲ့ Quinnဟာ ငါးမနျးတှကေို တိုကျခိုကျဖို့အတှကျ စဈသားဟောငျးကွီး ပငျလယျဖြံClaggartဆီမှာ တိုကျခိုကျနညျးတှသေငျပေးဖို့ တောငျးဆိုခဲ့တယျ။Claggartကငါးမနျးတှနေဲ့ တိုကျခိုကျဖို့က သတ်တိရှိပွီး ရူးမိုကျတဲ့အဖှဲ့တဈဖှဲ့လိုအပျတယျလို့ပွောတာကွောငျ့Quinnတဈယောကျက ပငျလယျဖြံအုပျထဲက ရူးမိုကျတဲ့ပငျလယျဖြံBerthနဲ့ သတ်တိရှိတဲ့ပငျလယျဖြံGeraldoကို ချေါလာကာ တိုကျခိုကျနညျးတှသေငျယူခဲ့တယျ။Quinnတဈယောကျ ငါးမနျးတှကေို အနိုငျယူနိုငျပါ့မလားဆိုတာ ကွညျ့ရှုကွပါအုံး။ ##zawgyi Seal Team ဇာတ်ကားမှာတော့ ပင်လယ်ဖျံလေးQuinnက အန္တရာယ်များတဲ့စွန့်စားခန်းတွေကို လုပ်ရတာနှစ်သက်တဲ့လူဖြစ်ပါတယ်။သူ့သူငယ်ချင်းBenjiကတော့ သူရဲ့အကြံတွေကို ရူးမိုက်လိုက်တာလို့ အမြဲပြောတတ်ပေမဲ့သူဘယ်သွားသွားအနားမှာရှိနေပေးတတ်သူဖြစ်တယ်။ Quinnနဲ့Benjiတို့ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်က အချင်းချင်းစောင့်ရှောက်ကြမယ်လို့ ကတိပေးထားကြတာဖြစ်တယ်။တစ်နေ့မှာတော့ Quinnရဲ့စွန့်စားခန်းကို လိုက်လာတဲ့ Benjiတစ်ယောက်ဟာ ငါးမန်းGrimesရဲ့ စားတာကိုခံလိုက်ရတယ်။ သူငယ်ချင်းကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့ Quinnဟာ ငါးမန်းတွေကို တိုက်ခိုက်ဖို့အတွက် စစ်သားဟောင်းကြီး ပင်လယ်ဖျံClaggartဆီမှာ တိုက်ခိုက်နည်းတွေသင်ပေးဖို့ တောင်းဆိုခဲ့တယ်။Claggartကငါးမန်းတွေနဲ့ တိုက်ခိုက်ဖို့က သတ္တိရှိပြီး ရူးမိုက်တဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လိုအပ်တယ်လို့ပြောတာကြောင့်Quinnတစ်ယောက်က ပင်လယ်ဖျံအုပ်ထဲက ရူးမိုက်တဲ့ပင်လယ်ဖျံBerthနဲ့ သတ္တိရှိတဲ့ပင်လယ်ဖျံGeraldoကို ခေါ်လာကာ တိုက်ခိုက်နည်းတွေသင်ယူခဲ့တယ်။Quinnတစ်ယောက် ငါးမန်းတွေကို အနိုင်ယူနိုင်ပါ့မလားဆိုတာ ကြည့်ရှုကြပါအုံး။ Review – Myet Chel File Size – 1.3GB,2.6GB Format…mp4 Quality : 1080p WED-DL,720p ...
Encanto (2021) ##unicode Disney ကနအေသဈထှကျရှိလာတဲ့Encantoဆိုတဲ့ကာတှနျးကားအသဈလေးကိုတငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ ဆုတှအေတှကျဆနျကာတငျစာရငျးတှမှောပါဝငျနပွေီးတော့ rating reviewအရမျးကိုကောငျးတဲ့ကားလေးဖွဈပါတယျ Encanto ဆိုတဲ့ဒသေလေးမှာမာဒရီဂယျမိသားစုတှဟောဟိုးအရငျကတညျးက မြိုးရိုးစဉျဆကျနထေိုငျခဲ့ကွတာပါ မာရီဘယျရဲ့အဘှားဖွဈသူဟာဒီဒသေလေးကိုရောကျရောကျခငျြး ထူးခွားတဲ့မှျောစှမျးအငျတှကေိုရရှိခဲ့ပါတယျ မာဒရီဂယျမိသားစုဟာမှျောစှမျးအငျကိုလူတှရေဲ့ အကြိုးအတှကျအသုံးခလြာခဲ့ပွီးမာဒရီဂယျမိသားစုဝငျတိုငျးမှာမှျောအစှမျးတှပေိုငျဆိုငျထားကွပါတယျ မာရီဘယျဆိုတဲ့ကောငျမလေးကလှဲလို့ပေါ့တဈရကျမှာတော့မာဒရီဂယျမိသားစုရဲ့မှျောပညာကို ထိခိုကျနိုငျမယျ့ အငျအားတဈခုပျေါပေါကျလာပါတော့တယျ မာရီဘယျဆိုတဲ့ကောငျမလေးမှာဘာကွောငျ့မှျောစှမျးအငျမရှိတာလဲ မာဒရီဂယျမိသားစုရဲ့မှျောစှမျးအငျကိုထိခိုကျစမေယျ့အရာကဘာလဲဆိုတာကိုတော့ ဇာတျလမျးထဲမှာဆကျလကျကွညျ့ရှုပေးကွပါဦးနျော ##zawgyi Disney ကနေအသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့Encantoဆိုတဲ့ကာတွန်းကားအသစ်လေးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ဆုတွေအတွက်ဆန်ကာတင်စာရင်းတွေမှာပါဝင်နေပြီးတော့ rating reviewအရမ်းကိုကောင်းတဲ့ကားလေးဖြစ်ပါတယ် Encanto ဆိုတဲ့ဒေသလေးမှာမာဒရီဂယ်မိသားစုတွေဟာဟိုးအရင်ကတည်းက မျိုးရိုးစဉ်ဆက်နေထိုင်ခဲ့ကြတာပါ မာရီဘယ်ရဲ့အဘွားဖြစ်သူဟာဒီဒေသလေးကိုရောက်ရောက်ချင်း ထူးခြားတဲ့မှော်စွမ်းအင်တွေကိုရရှိခဲ့ပါတယ် မာဒရီဂယ်မိသားစုဟာမှော်စွမ်းအင်ကိုလူတွေရဲ့ အကျိုးအတွက်အသုံးချလာခဲ့ပြီးမာဒရီဂယ်မိသားစုဝင်တိုင်းမှာမှော်အစွမ်းတွေပိုင်ဆိုင်ထားကြပါတယ် မာရီဘယ်ဆိုတဲ့ကောင်မလေးကလွဲလို့ပေါ့တစ်ရက်မှာတော့မာဒရီဂယ်မိသားစုရဲ့မှော်ပညာကို ထိခိုက်နိုင်မယ့် အင်အားတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာပါတော့တယ် မာရီဘယ်ဆိုတဲ့ကောင်မလေးမှာဘာကြောင့်မှော်စွမ်းအင်မရှိတာလဲ မာဒရီဂယ်မိသားစုရဲ့မှော်စွမ်းအင်ကိုထိခိုက်စေမယ့်အရာကဘာလဲဆိုတာကိုတော့ ဇာတ်လမ်းထဲမှာဆက်လက်ကြည့်ရှုပေးကြပါဦးနော် Review – Phyu Sin File Size – 1.2GB,2.4GB Format…mp4 Quality : 1080p WED-DL,720p WED-DL Genre : Animation,Comedy,Drama Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Hmue & Phyu Sin Encoded by Arrow